Xafnium ismiidaamin, HfSi2 - Goodao Technology Co., Ltd.
Dilalka loo yaqaan 'Hafnium silicide' waa nooc silsilad bir ah oo isdaba-marin ah, taas oo ah nooc ka mid ah isku-dhafka dhexdhexaadka ah. Sababtoo ah sifooyinka gaarka ah ee jirka iyo kiimikada, isdifaaca Hafnium ayaa si guul leh loogu dabaqay aagagga qalabka semiconductor biraha oksaydhka ah ee la isku daro, daboolka filimada khafiifka ah, modules-ka qaab dhismeedka badan, walxaha korantada, qalabka heerkulka korantada iyo qalabka sawir-qaadista Qalabka nano waxay muujinayaan astaamo gaar ah oo koronto, muraayadaha indhaha, magnetic iyo thermoelectric, iyo xitaa waxay leeyihiin qiime codsi macquul ah oo ku saabsan berrinka catalysis.
Waxyaabaha lagu nadiifiyo hafnium
Dilalka loo yaqaan 'Hafnium silicide' waa nooc silsilad bir ah oo isdaba-marin ah, taas oo ah nooc ka mid ah isku-dhafka dhexdhexaadka ah. Sababtoo ah sifooyinka gaarka ah ee jirka iyo kiimikada,
Dilka loo yaqaan 'Hafnium silicide' waxaa si guul leh loogu dabaqay aagagga qalabka isku-dhafka ah ee isku-dhafka ah ee loo yaqaan 'oxic semiconductor', daboolida filimka khafiifka ah, modules-ka qaabdhismeedka badan, walxaha korantada, qalabka heerkulka korantada iyo qalabka sawir-qaadista
Qalabka nano waxay muujinayaan astaamo gaar ah oo koronto, muraayadaha indhaha, magnetic iyo thermoelectric, iyo xitaa waxay leeyihiin qiime codsi macquul ah oo ku saabsan berrinka catalysis.
Astaamaha disha-dilinta hafnium
Badeecadu waxay leedahay daahirsanaan sare, cabbirka yar yar, qaybinta lebiska, dusha sare ee gaarka ah iyo waxqabadka dusha sare.
Beeraha Codsiga Waxyaabaha dhoobada, soosaarka qaybaha heerkulka sare u adkaysta iyo qaybaha shaqada
Isticmaalidda silsiladda Hafnium ee diyaarinta maaddada
1. Diyaarinta SiC - hfsi2 - TaSi2 ka hortagga kala-soocidda isku-dhafka. Isku-darka kaarboonka kaarboonku (C / C) ee la xoojiyey waa nooc cusub oo ah waxyaabo isku dhafan oo heerkulkiisu sarreeyo oo isku dhafan oo leh kaarboon kaarboon ahaan xoojinta iyo kaarboonka loo yaqaan 'pyrolytic carbon as matrix'. Sababtoo ah awoodeeda heerkulka sare, caabbinta soo noqnoqashada iyo muranka wanaagsan iyo astaamaha guryaha, horaantii 1970-yadii, Mareykanka wuxuu fuliyay shaqada cilmi baarista ee isku dhafka C / C ee qaababka kuleylka, taas oo ka dhigtay isku-darka C / C inuu ka soo baxo kululaynta qalabka ilaalinta kuleylka qalabka dhismaha. Maaddaama ay tahay qalabka qaabdhismeedka kuleylka, isku-darka C / C waxaa loo isticmaali karaa qaybaha dhismaha ee mashiinka marawaxadaha gaaska, daboolka sanka ee mashiinka bannaan, geeska hore ee garabka, iwm. Inta badan qeybahan waxay ka shaqeeyaan heerkulka sare iyo deegaanka qiiqa.
Si kastaba ha noqotee, isku-darka C / C way fududahay in la oksijiyo oo caadi ahaan looma isticmaali karo jawiga oksidheer ee ka sarreeya 400 ℃. Tani waxay u baahan tahay kahortagga qallafsanaanta isku-dhafan ee C / C, iyo diyaarinta ka-hortagga oksaydhku waa mid ka mid ah tallaabooyinka ugu muhiimsan ee ilaalinta. Natiijooyinka waxay muujinayaan in iska caabinta ka-goynta isku-darka C / C ay sii fiicnaan karto markii Zr, HF, Ta, TiB2 iyo biraha kale ee diida lagu daro matoorka kaarboon. Si loo fahmo saameynta HF iyo TA ay ku leedahay astaamaha isku dhafan ee isku dhafka C / C, SiC-hfsi2 - TaSi2 ka hortagga soo-saarista kahortagga waxaa loo diyaariyey habka gundhigga. Waxqabadka soo saarista ee daahan waxaa lagu cabiray aaladda baabi'inta oxyacetylene.
2. Diyaarinta qalabka korontada ku shaqeeya ee korantada. Kuwaas oo ay ka mid yihiin anode, lakab iftiin-dhalinaya, cathode iyo dabool baakad xirxiran oo xiraya lakabka iftiinka-sii-deynaya iyo cathode-ka ku yaal anode, daboolka baakadu wuxuu ka kooban yahay lakab silikoon nitride ah iyo lakab xayndaab ah oo lagu sameeyay dusha sare ee silsiladda lakabka carbide; maaddada lakabka xayndaabka waxaa ka mid ah silicide iyo biraha oksaydh, silicide-ka waxaa laga soo xushay silromium-ka loo yaqaan 'chromium silicide, disilicide' tantalum, Hafnium silicide, titanium disilicide iyo disilicide The oxide oxide waxaa laga soo xulay magnesium oxide, aluminium oxide, titanium dioxide, zirconia, hafnium dioxide iyo tantalum pentoxide. Nolosha aaladda soo saarta iftiinka dabiiciga ah waa mid dheer. Hal-abuurka ayaa sidoo kale bixiya habka diyaarinta aaladda korantada dabiiciga ah.
3. Been abuurida walxaha kuleylka korontada ku shaqeeya ee loo yaqaan 'Si Ge alloy'. Qaybta heerkulka korantada ee ku saleysan 'SiGe' waxay ka kooban tahay lakabka korantada, aaladda SiGe ee kuleylka heerkulka korantada iyo lakabka xayiraadda ee u dhexeeya lakabka korantada iyo lakabka heerkulka korontada ku saleysan ee SiGe. Lakabka xayndaabku waa isku dar silid iyo silikoon nitride, is dilkuna waa ugu yaraan mid ka mid ah silly molybdenum, silung tungsten, silbal cobalt, niicel niicil, niobium silicide, zirconium silicide, tantalum silicide iyo Hafnium silicide. Isku xirnaanta walxaha kuleylka ah ee silsiladda 'silicon' ee kuleylka kuleylka leh ayaa si fiican isugu xiran, ma jiro dildilaacyo iyo ifafaale faafitaan cad oo laga helayo is-dhexgalka, iska caabbinta xiriirku way yar tahay, xaaladda xiriirka kuleylka ayaa wanaagsan, waxay u adkeysan kartaa baaritaanka xawaaraha sare ee muddada-dheer . Intaa waxaa dheer, habka diyaarinta wuxuu leeyahay faa'iidooyinka habka fudud, kalsoonida sare, qiimaha hooseeya, ma laha qalab gaar ah oo ku habboon wax soo saarka ballaaran.
4. Nooc ka mid ah kuleylka sare ee u adkeysiga iyo ka hortagga oksidheer ee isku dhafan ee isku dhafan ayaa loo diyaariyay. Filimka iskudhafka ah waxaa lagu gartaa in daaha uu kakooban yahay bir diidan, carbide diidan iyo iskudhaf dhexdhexaad ah, iyo dhumucda dusha sare waa 10 μ m ~ 50 μ M. Birta diidan waa mid ama kabadan molybdenum, tantalum, zirconium iyo hafnium; carbide-ka diidmada ahi wuxuu ka kooban yahay carbide silicon iyo hal ama in ka badan oo ah carbide tantalum, carbide zirconium iyo carbide hafnium; xarunta dhex dhexaadku wuxuu ka kooban yahay hal ama in ka badan oo ah silly molybdenum, tantalum silicide, zirconium silicide, silnika Hafnium, tantalum carbide, zirconium silicide iyo hafnium carbide; qaabdhismeedka madadaalada ee daaha waxaa sameeya amorphous iyo / ama nanoparticles polycrystalline.
Hore: Is-dilidda Tungsten, WSi2
Xiga: Niobium Silicide, NbSi2
Waxyaabaha loo habeeyay Warshad isdilinta ee Hafnium
Wax soosaarida Qalabka Hafnium
Warshadaha isdifaaca ee Hafnium
Warshadda is dila ee Hafnium
Soo saaraha Xafnium ismiidaaminta ah
Soo-saareyaasha Nadiifinta Xaafni
Xafnium budada siliciska Qiimaha
Xafnium silicide Price
Xigasho Xafnium silicide